काललाई जितेका छायाँकार जो पटक पटक मरेर बाँचे
Sat, Jun 23, 2018 | 11:41:39 NST
19:58 PM ( 12 months ago )
काठमाडौं, असार १३ – सिनेमा ‘लुट’मा सिनेम्याटोग्राफीका कारण चर्चामा आएको नाम हो पुरुषोत्तम प्रधान । अधिक व्यापार गरेर लुटले रेकर्ड राख्न सफल भएको थियो । पुरुषोत्तम प्रधान कामले सिने क्षेत्रमा धेरैले प्रिय नाम हो तर, आम दर्शकले भने कमै मात्रामा चिन्छन् । कारण उनी पर्दामा होइन पर्दापछाडिका हिरो हुन् ।
उनले लुट, लुट २, छक्का पन्जा, ड्रिम्स, प्रेमगीत २ लगायत सिनेमामा उत्कृष्ट सिनेम्याटोग्राफीको कला देखाई सकेका छन् । हाल उनी “कृ” को छायाकंनमा व्यस्त छन् । नेपालमा सय भन्दा धेरै सिनेम्याटोग्राफरहरु छन् । तर, त्यस मध्येमा पनि पुरुषोत्तम प्रधानको व्यस्तता अरुको तुलनामा अधिक छ । उनी काम प्रतिको लगावले गर्दा नै नेपालका नम्बर एक सिनेम्याटोग्राफर बन्न सफल भएका छन् । काठमाडांैको असनमा जन्मेका पुरुषोत्तम प्रधानको व्यक्तिगत जीवन भने एउटा सिनेमा भन्दा कम छैन ।
उनी ५ वर्षको हुँदा आफ्ना बुवालाई गुमाएका थिए । बाल्यकालमा बुवाको माया अनि हेरचाह नपाएका प्रधानले जीवनमा धेरै हण्डर र ठक्कर खाएका छन् । झण्डै १५ वर्ष प्रेम गरेर विवाह गरेका प्रधानले विवाह गरेको १ वर्षमै आफ्नी जीवनसंगीनी पनि गुमाए । एक महिना नपुगेकी दुधे छोरी उनकै काखमा छोडेर जीवनसंगीनी यो संसारबाट जानु उनको जीवनको कालो दिन थियो । तर परिवारका असाध्यै प्रिय व्यक्तिलाई गुमाएका प्रधानले आफूलाई कहिल्यै पनि विचलित गराएनन । पर्दा पछाडिका हिरो सिनेम्याटोग्राफर अर्थात छायांकार पुरुषोत्तम प्रधानको आज जन्मदिन पनि परेको छ । यहि अवसर पारेर उनका बारेमा भएको केही रोचक कुराकानीमा अधारित केही जानकारी राख्दैछौँ ।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा धेरै सिनेम्याटोग्राफर भए पनि त्यसमध्य ४–५ जना चाहि धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ ।’ उनलाई पहिले पर्दामा आउन निकै रहर लाग्थ्यो । तर, अहिले दर्शकले नामले भन्दा कामले चिनुन् भन्ने चाहना उनको रहेको छ । यसको बारेमा कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘मलाई स्वयम भन्दा मेरो कामले चिनेको मन पर्छ । मलाई मेरो ज्यानको माया भन्दा पनि आमा, भाई र छोरीको माया धेरै लाग्छ । काम गर्दा मलाई धेरै पटक चोट पटक लागेको छ । तर कुनै पनि सिनेमामा, यो सट लिदा मेरो ज्यान जोखिममा पर्छ , म गर्दिन ! भन्ने महसुस मलाई कहिल्यै हुदैन ।’
विवाह गरेको १ वर्ष र छोरी जन्मेको एक महिना पनि नपुग्दै श्रीमतीको वियोग प्रधानले खेप्नु परेको छ । अहिले प्रधानकी छोरी २७ महिनाकी भइन् । आफ्नी छोरीको बारेमा बोल्दैप्रधान भन्छन्, ‘मेरो श्रीमतीको निधन पछि मैले उसको हुर्काईबढाई आफैले गरेको छु । ऊ राम्ररी बोल्छे र हिजोआज स्कुल पनि जान थालेकी छ । केही दिन अघि उसले मेरो मामु कहाँ हुनुहुन्छ ? भनेर सोध्दै थिई । त्यस्तो बेलामा मलाई सारै नरमाईलो लाग्ने गर्छ । सायद यो उसको आफ्ना नजिकका मान्छेहरुलाई सम्झने समय होला ।’
छोरीको विषयमा कुरा गर्दै प्रधान अगाडि थप्छन्, ‘ऊसँग हुँदाको समय मलाई निकै रमाईलो लाग्छ । मेरो अनुहार मात्र नभएर उसको र मेरो बानी व्यवहार पनि उस्तै छ । आमाले मलाई ऊ ठ्याक्कै तँ जस्तै छे भन्नुहुन्छ । ऊसँग भएको बेलामा मेरो समय कसरी बित्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा नै हुँदैन ।’‘म मेरो श्रीमतीलाई कुनै क्षणमा त सम्झिरहन्छु ।
मेरो जीवनमा जे भयो त्यो सबै लेखान्त हो । सेक्सपियरको फिलोसोफी ‘जीवन एउटा ड्रामा र संसार एउटा स्टेज हो’ भन्ने कुरा मलाई एकदमै सही लाग्छ । त्यो कुरालाई न्याय दिनपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा म हिँड्छु । उसलाई सम्झेर बसेँ भने म डिप्रेसनमा जान्छु । मैले नेपाली सिनेमालाई उठाउनुपर्छ भन्ने जोस र परिवारप्रतिको कर्तव्य लिई अगाडि बढीरहेको छु । त्यही कारण ममा उसलाई मात्र सम्झेर समय खेर फाल्नु भन्दा केही राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच आइरहन्छ ।’
काम गर्दा तीन पटक भगवानले गर्दा बाँचे
वास्तवमा छायाँकारको काम जोखिमपूर्ण काम मध्येको एउटा काम हो । किनकी सिनेमाको लागि आवश्यक सटको लागि अफ्ठ्यारो र खतरनाक स्थानमा पुगेर खिच्नु पर्ने हुन्छ । थोरै सावधानी र सुरक्षाको उपाय अपनाइएन भने ठूलो दुर्घटना पनि हुन सक्छ । कयौँ चोटी मरेर बाँचेका पुरुषोत्तम प्रधानका दुर्घटनाका कथा धेरै छन् ।
स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठको सिनेमा ‘गोरखाली’मा सहयोगी छायाँकार भएर काम गर्दा भएको दुर्घटना प्रधान सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘पानी सिमसिम परेर रोकिएको क्रममा गार्डेन लाइटमा काम भइराखेको थियो । पानी परेर फिल्मको लाइट निकाल्यौँ । एकछिनमा लाइटलाई फेरि मिलाउने क्रममा मल्टि २० भन्ने लाइटले एकदमै नराम्रोसँग झट्का हान्यो । त्यो बेलामा म झण्डै मरेको । म मर्नुपर्न मान्छे हो त्यही बेला तर सबिन भन्ने साथीले स्विच अफ गरेर बचाएको हो । त्यो मेरो पुनर्जन्म हो ।’
पुराना कुरा सम्झँदै उनी अगाडि थप्छन्, ‘त्यसपछि ‘वीर गणेशमान’ भन्ने सिनेमाको छायाँकंनका क्रममा पनि दुर्घटनामा भएको थियो । एनएफडिसीको पूरानो क्रेन थियो । भिमशरण सर र मन्जुकुमार श्रेष्ठ चाहिँ सिनेम्याटोग्राफर डि.ओ.पी हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा पशुपतिको हाइटमा बसेर मैले फ्रेमिङ्ग गर्दै थिएँ । म बसेको क्रेन बाङ्गगिएर भाँचियो । त्यहाँबाट खसेर पनि बाचेँ ।’
अर्को एउटा चाहिँ ‘बटालिएन ५’ सिनेमा जुन अहिलेसम्म बनेको छैन त्यो रामराज्यजी ले निर्देशन गरेको सिनेमा थियो । यो ‘लुट’ पछिको कुरा हो । त्यो सिनेमाको लोकेसन हेर्न जाँदा किया कार नागढुङ्गामा दुर्घटना भएर खोलातिर पर्खालमा ठोकिएर मेरो निधारमा घाउ भएको थियो । त्यसको दाग अझै छ । मेरो निधारमा ५–७ वटा गहिरो टाका पनि लागेको छ । सिनेमाको क्रममा भएको दुर्घटनाहरु यीनै हुन ।’
घरमा सानी छोरी अनि बुढी आमाको सम्झना र उनीहरुको लागि भए पनि बाँच्नु पर्ने पुरुषोत्तम भने खतरनाक दृश्य खिच्न जस्तोसुकै जोखिम मोलेर अगाडि तम्सिन्छन् । जीवनको माया लाग्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘मन देखि केही कुरा आँटेर अघि बढ्यौ भने जिन्दगीमा केही नराम्रो हुँदैन । मैले के काम गर्दा राम्रो हुन्छ ? के गर्दा नराम्रो हुन्छ ? भन्ने कुरा म आफै सोँच्छु ।’